Arsenal Oo Ceyrineysa Xiddigo Uu Kamid Yahay Leno – Garsoore Sports
Arsenal Oo Ceyrineysa…
Arsenal ayaa qorsheyneysa inay dib u habeyn balaaran sameeyso xagaagan, waxayna diyaar u tahay inay iska dirto ciyaartoy dhowr ah si ay lacag uga hesho waxaana cayaartooydaas kamid ah goolhayaha koowaad ee Bernd Leno.
Kooxda Mikel Arteta ayaa si aad ah uga hoos martay wixii laga filayay sannadkan. Waxayna ku jiraan kaalinta sagaalaad ee kala sarreynta Premier League, iyagoo 11 dhibcood u jira affarta koox ee ugu sarreysa horyaalka xilli ay wajahayaan mid kamid ah bandhigyadoodii ugu xumaa.
Tababare Arteta ayaa dhowaan qirtay isagoo la hadlaga Sky Sports inuu rajeynayo inuu helo taageerada milkiilaha kooxda ee Stan Kroenke, laakiin Arsenal ayaa wali ku qasbanaan doonta inay iska dirto ciyaartoy dhowr ah si ay boos ugu helaan soo galootiga.
Football.london waxay sheegeysaa in Leno uu yahay mid kamid ah cayaartooyda fara ku tiriska ah ee aanan hubin mustaqbalkooda kooxda.
Arteta ayaa garab istaagay Leno xagaagii hore, isagoo kooxda ka diray goolhaye Emiliano Martinez oo ay ka iibiyeen Aston Villa waxaana markaasi uu doorbiday inuu ku dheganaado laacibka reer Jarmal, laakiin wararka xanta ah ayaa soo jeedinaya in Arsenal ay ka qoomameynayaan go’aankaa waxayna u muuqataa inay haatah diyaar u yihiin inay xiriirka u jaraan Leno haddii qiima sax ah ay ku helaan xagaaga.
29 jirkaan oo ku sii dhawaanaya labadii sanno ee ugu dambeysay qandaraaskiisa ayaa dhowaan qirtay inuu u furan yahay fikirka ah inuu ka tago Arsenal xagaagan, isagoo intaa ku daray inuusan dhibaato ku qabin inuu xitaa sii joogo garoonka Emirates.
Waxay umuuqataa in Arsenal ay durbaba fiirineyso xulashooyin kale.
Goolhayaha kooxda Ajax ee Andre Onana ayaa ku jira liiska xiddigaha ay doonayaan, inkastoo ay tahay in ay Gunners sugto racfaanka uu ka qaadanayo ganaaxii la saaray kaddib markii uu isticmaalay daroogada tamarta siisa cayaartooyda- kaas oo haatan lagu wado in uu garoomada ka maqnaado ilaa iyo February 2022.
Leno kasokoow, Arsenal ayaa dhageysanaysa dalabyada u imanaya Hector Bellerin, Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Ainsley Maitland-Niles iyo Sead Kolasinac, halka ay jiraan rajo ay ka qabaan inay kooxda Stuttgart ku qanciyaan inay amaahda xiddiga Gunners ee Dinos Mavropanos ay ka dhigaan mid joogto ah.